Banyere Anyị - IntoKildare
Ndị kansụl mpaghara Kildare na -akwado, n'ime Kildare bụ bọọdụ ndị njem maka County Kildare. N'iji ihe karịrị 100 njem nlegharị anya na azụmaahịa ọbịa na mpaghara niile nke ụlọ ọrụ ahụ, Into Kildare na -akwalite ógbè ahụ na ahịa ụlọ na nke mba ụwa iji mee Kildare ebe kwesịrị nleta.
N'ime Kildare bụ mkpakọrịta ndị otu anaghị akwụ ụgwọ, nke Kildare County Council na-akwado ma bụrụ olu njem na-anọchite anya ọdịmma ụlọ ọrụ na ọkwa mba na mba.
Njem nlegharị anya bụ ihe na -enyere aka n'ịmepụta ọrụ ma na -enwe mmetụta dị mma maka ọdịmma akụ na ụba na mmekọrịta ọha na mpaghara. N'ime Kildare na-enye aka ma na-emetụta mmepe usoro ogologo oge nke County Kildare ma soro ndị na-emekọrịta ihe nwee ike ịkwalite uto njem.
Dị ka ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya, Into Kildare nwere ikike izigara ya
"Wulite ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na -atọ ụtọ, nke na -adigide na County Kildare ebe ndị nwere mmekọ na -arụkọ ọrụ ọnụ iji chepụta ma nyefee ahụmịhe dị mma maka ndị ọbịa ụlọ na mba ofesi, mepụta ọrụ, kwalite akụ na ụba obodo ma chekwaa gburugburu ebe obibi."
Atụmatụ atụmatụ maka njem nlegharị anya na Kildare 2022-2027, bụ Minista Catherine Martin TD malitere na 17 Nọvemba 2021. Usoro a na-achọ ịkwalite ikike njem njem nke County Kildare iji nweta ọhụụ site n'ịkwalite ike na ohere site na iji usoro nke isii na-eduzi. ihe mgbaru ọsọ na isii atụmatụ ụzọ.
Atụmatụ atụmatụ maka njem nlegharị anya na County Kildare 2022-2027
Ọhụụ maka njem nlegharị anya Kildare
"Kildare, mgbapụ ime obodo dịdebere obodo ahụ, bụ nke a ma ama n'ụwa niile maka ahụmịhe zuru oke, ebe a na-emekọrịta ihe na omenala bara ụba, ọmarịcha ọdịdị ala, na nnabata nke ọma. Ethos na-adigide na-adabere na njem nlegharị anya na-enwe mmetụta dị ala bụ isi ihe anyị na-eme. Mpaghara anyị bụ ebe dịpụrụ adịpụ, yana ngwakọta nke akụkọ ihe mere eme na-adọrọ adọrọ na ịma mma ọgbara ọhụrụ; ebe ị ga-ejikọta na mmekọ ọnụ na ndị enyi na ezinụlọ; ebe ịtụteghachi na ịchaji bụ ịgba ọsọ n'ezie."
Framework maka Kildare Tourism
Enwere atụmatụ isii dị mkpa nwere ebumnuche doro anya maka njem nlegharị anya Kildare iji mee ka ahụmịhe ndị ọbịa na-adọrọ adọrọ na nke dị elu, yana ụlọ ọrụ na-agbanwewanye ike, asọmpi na ihe ọhụrụ nke na-enye ndị obodo Kildare uru akụ na ụba obodo. Otu nke dabere na ụkpụrụ nke njem nlegharị anya na-adịgide adịgide na nke na-emegharị ahụ, na-ahapụ ebe dị mma karịa ka ọ dị na mbụ.
Gosipụta ọchịchị na imekọ ihe ọnụ. Ndị otu na-ahụ maka njem nlegharị anya na Kildare ga-arụkọ ọrụ ọnụ n'ọhụụ nkịtị, na-agbalịsi ike maka ebe ịdị n'otu na asọmpi, na usoro ọchịchị siri ike na nke dị irè karị, na ntinye ego kwesịrị ekwesị.
Kwado nrụpụta ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Kildare ga-esiwanye ike site na nkwado digitization iji kwado ụzọ njem nlegharị anya mara mma, nkwado maka mgbanwe carbon dị ala, na-enye ohere ịkparịta ụka n'Ịntanet na site na iwulite ikike ezubere iche.
Ịmepụta ahụmịhe na-adọrọ adọrọ. A ga-emepụta ahụmihe ndị ọbịa klaasị ụwa ọhụrụ nke na-enye ihe nmikpu, ihe na-akpali akpali iji gaa na Kildare ma kpalie ọtụtụ ọnụnọ abalị na-agbasi mbọ ike na njem nlegharị anya na-emegharị ahụ.
Kwado njikọ ebe ị ga-aga na nnweta. Ntugharị nke ụzọ ndị ọbịa nwere ike isi nweta County kildare ga-elekwasị anya na njikọ njem ọhụrụ, akara akara, imewe ụwa niile, yana ebe obibi ndị ọbịa ka ukwuu.
Mee ka ndị ọbịa mara. Akụkụ ahịa dị mkpa n'etiti ndị ọbịa n'ime ụlọ na nke mba ụwa ka a ga-ezubere ịkwalite mmata nke Kildare dị ka mgbanarị ime obodo nwere ahụmịhe pụrụ iche site na ọtụtụ mgbasa ozi dijitalụ na mbipụta, mmemme, onyinye ngwugwu na njem njem.
tụọ mmetụta atụmatụ. Ụzọ njem dị mma ga-eme ka nchịkọta na nyocha nke ọtụtụ data njem nlegharị anya iji mee mkpebi na iji rite uru na obodo Kildare.
David Mongey (Nkwukọrịta Mongey)
Brian Fallon, Onye na -echekwa ego (Fallon nke Kilcullen)
Brian Flanagan, onye na -echekwa ego (Silken Thomas)
Anne O'Keeffe, Onye ode akwụkwọ
Sonya Kavanagh (Kọmitii mpaghara Kildare)
Marian Higgins (Kọmitii mpaghara Kildare)
Cllr. Suzanne Doyle (Kọmitii mpaghara Kildare)
Michael Davern (Onye na -ere ahịa)
Kevin Kenny (Ụlọ ihe nkiri Shackleton)